Adam Stewart, mpanorina, dia mizara ny maha-zava-dehibe ny Foundation Sandals
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Adam Stewart, mpanorina, dia mizara ny maha-zava-dehibe ny Foundation Sandals
Izahay dia iza.
Adam Stewart no nandefa ny Sandals Foundation 10 taona lasa izay satria nihalehibe izy nahita izany rehetra izany, anatiny sy ivelany, avy amin'ny zoro izay mbola tsy nisy olona nahita. Mandrak'izao.
Angamba tsy izao no fotoana tsara indrindra hidirana ao amin'ny biraon'i Adam Stewart. Ny filoha lefitry ny Sandals Resorts International sy ny mpanorina ny Sandals Foundation dia nahavita fivoriana marathon, izay somary lava kokoa noho ny antsasaky ny hazakazaka hazakazaka hataony amin'ity faran'ny herinandro ity.
Amin'ny 4 ora hariva izao, mametraka antsika afovoany eo anelanelan'ny sakafo fisakafoanana tapitr'i Adama sy ny sakafo hariva tara. Nitsoka rano i Adama mba hitazomana azy.
“Tena te hanao an'io ve ianao izao?” manontany ianao.
Tsy azon'i Adama lavina fa aleony eo ankavanan'ny varavaran'ny biraony. Izany no mahatonga azy hanana fampahatsiahivana momba ny “any ivelany” eto. Misy globe iray toa mijanona mihodina afovoany ka manatrika ny latabany ireo nosy Karaiba. Misy sarin'ireo dobo lomano Sandaly manaitra sy golf ary… hoy i Richard Branson!
Fa ny toerana akaiky indrindra an'i Adama dia misy andalana sary 8 × 10 miaraka amina lohahevitra tokana: Fianakaviana. Ny vadin'i Adama sy ny zanany telo dia mipetraka ary mijoro amin'ny toerana maro, santimetatra vitsivitsy miala eo aminy, tontolo andro.
"Manampy trotraka ny faniriako hanampy ny vondrom-piarahamoninay ireo ny fianakaviako," hoy izy.
Rehefa manontany ianao raha vonona hanao an'ity resaka ity dia maharesy lahatra toa ny feony ny mason'i Adama. "Tokony ka." Makà rano roa sipa indray izy rehefa manomboka miteny ianao hoe, “Ny faha-10 taonan'ny Sandals Foundation…”
Avy any i Adama no maka izany.
Tokony ho fantatrao aloha ny momba ny ray aman-dreniko.
Namboly voa ho an'ny Foundation izy ireo fony aho nihalehibe teto Jamaika. Hafa mihitsy anefa ny nataon'izy ireo.
Dada (mpanorina ny kapa ary ny filoha Gordon "Butch" Stewart) dia nihevitra fa mila manangana orinasa mahomby izy mba hanome. Aza adino, ny indostrian'ny fampidiran-dresaka rehetra dia tena tanora tamin'ny nanombohany tamin'ny 1981 - ny taona nahaterahako. Nino izy fa ny Sandals dia miaina mihoatra ny andrasana amin'ny vahiny, dia maro kokoa ny vahiny ho avy. Ary maro ny vahiny nilaza fa afaka mamorona asa bebe kokoa izy ary mahafeno ny filàna bebe kokoa ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy olana. Nieritreritra ireo olona ireo ho toy ny fianakaviana i Dada. Izany no antony niasany 20 ora isan'andro.
I Neny, etsy ankilany, dia nieritreritra fa tsy mila fanampiana be dia be amin'ny olona ianao. Nanam-potoana hananganana trano ho an'ny mahantra izy ary hanao akanjo tsara ho an'ireo tsy mahay. Raha ny marina dia nanontaniako izy raha afaka mijery ny zanakay mandritra ny hazakazaka marathon amin'ity faran'ny herinandro ity, saingy miasa ho an'ny fiantrana antsoina hoe Back on the Rack ao Kingston izy, ka tsy afaka.
Me? Izaho dia hybrid roa amin'izy ireo.
Tsy fantatry ny olona ny zava-nitranga tao ambadiky ny seho.
Ohatra, i Dada dia hanakana ny andro sasany amin'ny a Resort amin'ny morontsiraka ary mitondra zotram-batisan'ny ankizy avy amin'ny faritra ambany karama mba hankafy fialan-tsasatra kely sy hianatra momba ny fizahan-tany - mbola ataony izany. Nomeny ny sarany azony tamin'ny naha filohan'ny Fikambanan'ny Hotely ho an'ny mpanjono. Ny mpamily tsy miankina fotsiny no hakanany fiara fitaterana seranam-piaramanidina mba hanome asa ireo toeram-pialan-tsasatra fa tsy hitondra azy ireo. Vao tsy ela akory no fantatry ny olona fa ny 96 isan-jaton'ny vokatra any amin'ny trano fisakafoanana dia avy amin'ny tantsaha eo an-toerana. Ireo no karazana fanapahan-kevitry ny orinasa nataony hatrany hanohanana ireo olona mila izany.
Afaka nandeha foana aho, fa tsy tian'i Dada.
Tamin'ny taona 2009 izahay dia nanapa-kevitra ny hitondra izany amin'ny ambaratonga hafa.
Ny hevitra dia ny hanao izay efa nataontsika hatrizay, fa amin'ny fomba voalamina toy ny "The Sandals Foundation." Nandritra ny taona maro dia nieritreritra an'izay betsaka azontsika atao aho raha manao vondrona maromaro manodidina ny ezaka ataontsika:
-Mampiantrano vahiny izay tia Karaiba ary te handray anjara amin'ny fampivoarana azy - ary mankafy tombony amin'ny hetra.
-Miorina mpiara-miombon'antoka afaka miantraika amin'ny nosy.
-Ny mpivarotra fitsangatsanganana izay hampiroborobo ny programa toa ny Pack for a purpose and the Reading Road Trips.
-Ny ekipan'ny Sandal 14,000 izay monina amin'ireo vondrom-piarahamonina ireo.
Folo taona aty aoriana dia manatanteraka programa sy tetikasa 120 mahery isan-taona izahay. Mampiseho izany fa rehefa miara-miasa isika dia tsy misy fetra amin'ireo zavatra mahavariana azontsika atao.
Ny Foundation dia tsy mitovy amin'ny fikambanana hafa fanentanana.
Tsy mandeha amin'ny toerana hafa ny zavatra ataonay. Tsy any Azia. Tsy any Eropa. Mipetraka eto izahay, any Karaiba. Nipetraka teto ny ray aman-dreninay sy ny raibenay. Ireo no sakaizanay sy fianakavianay. Tsy mila mandresy lahatra olona iray miasa amin'ny Sandals mihitsy izahay mba ho anisan'ny ezaky ny Fondation, manomboka amin'ny mpiasan'ny fiandrasana ka hatrany amin'ireo tale jeneraly. Tsy indray mandeha.
Isika rehetra dia ao anatin'ny tapestry amin'ireo nosy. Ary ny resort sy ny mpanjifanay dia lasa ampahany amin'ny peratra ihany koa.
Ao anatin'ny toe-javatra tsy manam-paharoa ireo vahiny vahininay.
Farany, izahay dia maniry ny olona ho tonga hankafy ireo toerana mahafinaritra izay reharehanay tokoa antsoina hoe mody. Kasiho ny fasika sy ny tendrombohitra ary ny ranomasina. Fa fantaro ihany koa eo amin'ny hatsarana, ao anatin'ny toeram-pialan-tsasatra sy any ivelany, no ilana fanampiana. Manasa ny vahiny izahay handeha hiaraka amin'ireo masoivohon'ireo vondrom-piarahamoninay hiaina izany ho azy ireo.
Eritrereto ny bartender izay manondraka ny fisotroanao.
Ny fanomezana $ 25 dia mety hanampy amin'ny fanabeazana manan-danja ho an'ny zanany any an-tsekoly any an-toerana nohavaozina noho ny ezaky ny Foundation. ampio hahatonga ny ranomasina ho velona sy hatanjaka kokoa amin'ny fanatsarana ny asa fiveloman'ireo mpanjono eo an-toerana .. Ny mantra anay dia: “Tsy mila zavatra firy izahay amin'ny kely. Mila kely amin'ny be dia be isika. ” Ireo fihetsika toa kely ireo dia manova fiaraha-monina ara-bakiteny. Hitako io.
Iray amin'ireo zavatra mangatsiaka indrindra niarahanay…
… Fitsaboana ara-pahasalamana ho an'ny ankizy. Mampalahelo fa tsy misy teknolojia mety any Karaiba, dia matetika no diso famantatra ireo ankizy voan'ny aretin-dra sy homamiadan'ny zaza tsy ampy taona. Noho izany ny fanomezana vahiny dia namela anay hiara-hiasa amin'i SickKids. Izy ireo izao dia mampifandray ireo dokotera tena hajaina any Amerika Avaratra amin'ireo dokotera amin'ireo nosy amin'ny alàlan'ny telemedicine. Mamonjy aina ara-bakiteny.
Mieritreritra ny fiainan'ny zazavavy iray 13 taona tao Ocho Rios aho.
Teo afovoan'ny zazavavy bevohoka izy, izay midika matetika fa horoahina tsy hianatra izy ireo. Miara-miasa amin'ny toerana iray miaraka amin'ny zazavavy izahay mba hanomezana fampianarana sy fampianarana ho an'ny ray aman-dreny. Ny toe-javatra toa azy dia tsy mety ho ny fiafaran'ny dian'io zazavavy io, ny nofinofiny. 13 taona izy.
Raha ny marina dia tsy tena azoko ny fahazazako.
Nentin'i Neny avy tany am-pianarana aho ary nody teny am-pody mba hanao akanjo ho an'ny olona. Amin'ny maha-zaza ahy dia mieritreritra aho hoe: "Mandany adiny telo ity." Saingy namela fahatsapana izany. Rehefa nandeha tany amin'ny sekoly kilasimandry tany Boca Raton, Florida aho dia nanomboka nahatsapa fa tena tiako ny Karaiba. Ny sakafo. Ny olona sariaka. Ny tsio-drivotra mitsoka amin'ny trano tsy misy aircon. Ny hatsarana voajanahary. Saingy tsapako ihany koa ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny tombontsoa sy ny filàna lehibe eo amin'ny fiarahamonina Karaiba.
Samy marina i Neny sy i Dada.
Nanampy olona tamin'ny laharana voalohany i Neny nandritra ny am-polony taona maro. Te-ho mpandraharaha mendri-kaja i Dada. Nijanona tany Jamaika izy mba hanangana orinasa tamin'ny fotoana nialan'ny olona ho any amin'ny toerana ahazoana vola bebe kokoa, haingana kokoa. Nahazo fitokisana sy tsy fivadihana izy. Izany no mahatonga ny olona ao amin'ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra rehetra mahalala ny Sandal tsy hoe fialan-tsasatra fotsiny, fa toy ny olona maniry fatratra hanao soa. Heveriko fa izany no nahatonga ny Foundation afaka nanao zavatra betsaka tao anatin'izay 10 taona voalohany izay.
Teraka fotoana fohy taorian'ny nanombohanay ny Fondation ny zanako lahy.
Nanova ny fomba fijeriko izany. Ary avy eo teraka ny zanako vavy, ary vao mainka nanova ahy izany. Alohan'ny hananako zanaka dia afaka niresaka taminao momba ny tanjon'ny Fondation aho. Saingy nomen'ny zanako fahitana mazava amiko ny antony anaovantsika izany. Ny tiako holazaina dia hoe ahoana raha ny zanako no eo amin'ny kiraron'ireo sahirana?
Nandrisika ahy isan'andro izany eritreritra izany.
Maka sary ny zanany.
Jereo ny fahatanorany eto. Mety tokony hanavao ireo sary ireo aho, saingy heveriko fa sarotra ny mamela azy.
Te hahafantatra anao ny fianakaviana Stewart:
“Ny dolara tsirairay natolotra ny Sandals Foundation dia mandeha mivantana amin'ny antony iray. Tsy 50 isan-jato na 90 isan-jato. 100 isan-jato foana izany. Ny fanomezana $ 150 dia mety hanampy amin'ny fananganana trano fandroana any an-tsekoly na amin'ny famatsiam-bola any amin'ny hopitaly. Ny fanomezana $ 75 dia mety hanampy ny mpanao asa tanana eo an-toerana na ny toeram-pambolen'ny fianakaviana. Ny fanomezana iray dia mikasika ny olona amin'ny fomba tsy azonao an-tsaina. Satria ny asa malala-tanana tokana dia mampahatsiahy azy ireo fa misy olona any tena miahy. ”
Raha hametraka dolara vitsivitsy hiasa eo noho eo, mankanesa any SandalsFoundation.org ary kitiho ny bokotra "Donate Now". Hoy ny olona ao amin'ny vondrom-piarahamoninay Karaiba, "Misaotra anao nanome fanantenana sy fotoana mety."